I-China Best CP/HP 0-44% Teeth Whitening Gel Bulksale Manufacture and Factory | I-White Technology
Bonana nodokotela wakho wamazinyo ngaphambi kokuqala ukusebenzisa ijeli engcono kakhulu yokwenza amazinyo abe mhlophe ukwenza i-bleaChing. Angenza ithreyi yangokwezifiso ukuze afinyelele ama-contours omlomo futhi
chaza indlela yokusebenzisa ijeli ngendlela efanele. Noma ungafunda imanuwali yeziqondiso. Uma isetshenziselwa isisombululo esisekelwe emanzini, i-carbamide peroxide iyabola
ku-hydrogen peroxide, okuyingxenye esebenzayo yokwenza mhlophe.
Gcoba ijeli engcono kakhulu yokuhlanza amazinyo ethreyini. Geza amazinyo ngaphambi kokufaka isicelo. Udinga kuphela ukugqoka ithreyi amahora ambalwa emini noma ngo
ebusuku. Udokotela wakho wamazinyo angase ancome ukusebenzisa ithreyi yomlomo cishe amasonto amabili ukuze uthole amazinyo amhlophe. Sula kahle insalela emazinyweni noma ezinsinini nge
indwangu, umunwe ohlanzekile noma isixubho esithambile, bese ugeza umlomo ngamandla.
Ukusebenzisa ijeli emhlophe engcono kakhulu kuyindlela enhle yokwenza ukumamatheka kwakho kubonakale kugqamile, ngoba empeleni ushintsha umbala wamazinyo akho ngokufiphaza. Ku
ukuze ugcine ukumamatheka okumhlophe, floss umuthi wamazinyo nsuku zonke, njenge-bamboo charcoal toothpaste, kabili ngosuku. Ngaphansi kwesiqondiso, ungasebenzisa
best amazinyo mhlophe gel ukumamatheka ngokuphepha nangempumelelo ekhaya. Valelisa kumabala ekhofi namazinyo aphuzi, sawubona ngokumamatheka okuvuselelwe!
I-HR-TWG15 Ijeli yesirinji emhlophe ye-HTeeth
Imininingwane Usayizi ohlukile 3ml 5ml. 10ml
Amandla ejeli emhlophe: 0 1-35%HP 0 1-44%CP Ijeli Engenayo I-Peroxide. Ijeli ye-PAP , Carbamide/ Hydrogen/Non peroxide
2 Isirinji ku-3/5/10ml
3 Krt amazinyo enziwe ngokwezifiso ejeli
3 Ilebula yangasese
Ulwazi lwejeli yokuhlanza izinyo ukuze uthole ireferensi yakho Yisho ijeli ecwenga amazinyo
Umbala: I-TransparentBlue/Green/Whrte putter iyatholakala
Uhlobo Lwesixazululo Esimhlophe: Ijeli Ye-Carbamide/I-Hydrogen/ Non peroxide Umbala Ucacile
Namathisela ilebula ye-pnvate (faka igama lakho lomkhiqizo kanye nelogo)
Amasampula e-MOQ Amahhala Amasampula Ayatholakala
Izikhombisi-ndlela I-Whrtening Gel ngokwelashwa ngakunye
Susa isivalo sesirinji. gcina ukuze ugcinwe futhi usetshenziswe kamuva
Gcoba kancane kancane (cishe usayizi we-match headfof ijeli endaweni ngayinye yezinyo elivela ohlangothini olungaphezulu nangaphansi lwethreyi yomlomo wakho.
kufanele usebenzise cishe u-1/2 ml wejeli ohlangothini ngalunye ngesamba esingu-1ml ngokwelashwa ngakunye
Iziyalezo Faka ngokucophelela ithreyi eselilayishiwe manje emlonyeni wakho bese unyonyoba kancane kuze kube yilapho amazinyo akho ecwiliswa kujeli.
I-Teeth Whitening Gd iyinhlangano yezinga eliqeqeshiwe, ngakho-ke kufanele uzwe ngokushesha noma umuzwa wokugedla kwamazinyo ebusweni bakho.
Lokhu kuyinto evamile futhi kukwazisa ukuthi ifomula yenza umsebenzi wayo
Kufanele ulindele ukuzwa lokhu kuluma kwengxenye ebalulekile yokwelashwa kwakho.
Izixwayiso Okokusetshenziswa kwezimonyo kuphela. Ungagwinyi. Gwema ukuthintana namehlo Gcina kwileyisi epholile lapho izingane zingakwazi ukufinyelela khona Ukuzwela amazinyo esikhashana Yeka ukusebenzisa lapho ungaphatheki kahle noma ucasukile.
Amazinyo akhiwe ngoqweqwe lwawo lwangaphandle olugelezwa yi-dentin ethambile bese kuba umthambo wangaphakathi. Izakhamzimba (kanye namabala) adlulela ezinyo ngezimbotshana. Amazinyo anezimbotshana njengesikhumba. Ngokuhamba kwesikhathi, amabala okudla, isiphuzo, ugwayi nemithi abangela ukuphuzi kwemvelo. Ukuhlikihla amazinyo ngeke kususe
isethi ejulile amabala. Ifomula yejeli engcono kakhulu eyenza amazinyo abe mhlophe ikhulula ibala embotsheni ngokulicwilisa emazinyweni. Ukungena kweqiniso koqweqwe lwawo lwangaphezulu kwenzeka ngemva kwemizuzu engama-40. Ithreyi lakho langokwezifiso liqinisekisa ukuthi ijeli ixhumene ngokulinganayo nawo wonke ama-engeli ezinyo ngalinye.
Isudi yejeli emhlophe yamazinyo engcono kakhulu: I-Extrinsic tooth coloration (ethintwa ikhofi, ugwayi, isoso, i-te.food, njll) Ukushintsha umbala kwangaphakathi kwamazinyo (isb. i-fluorosis noma ukungcoliswa kwemithi ekhethekile) Amazinyo aphuzi ngokofuzo Enye imbangela yokushintsha kombala kwamazinyo Bonke abantu abafuna ukumamatheka okumhlophe nokugqamile
Singumkhiqizi ocwenga amazinyo wemikhiqizo eyenza amazinyo abe mhlophe, sinikezela ngelebula yangasese yomkhiqizo wamazinyo
ukukhiqiza imicu emhlophe yamazinyo, amajeli amazinyo abe mhlophe, amapeni amazinyo abe mhlophe, amazinyo amalahle acushiwe, impushana emhlophe, amazinyo
mhlophe kit ezifana
odokotela bamazinyo abangochwepheshe basebenzisa amakhithi ahlukahlukene amazinyo asehhovisi noma izinto zokucwenga amazinyo ekhaya,
futhi Yebo amazinyo mhlophe umshini.
Uma udinga imikhiqizo eminingi, sicela uchofoze eminye imikhiqizo yokuhlanza amazinyo.
sisekela ilebula yangasese yokuhlanza amazinyo e-charcaol, ilebula yangasese yokwenza amazinyo abe mhlophe, ilebula yangasese yokuhlanza amazinyo
nokunye, Ngakho senza amazinyo mhlophe wholesale.
Okwedlule: Ilogo ye-SmileKit Charcoal Strips
Olandelayo: I-Gel Single Product